polycarbonate awning ပေးသွင်းခြင်း။ -- gscanopy.com
UV Coating Honeycomb Polycarbonate Hollow Sheet ဖြစ်သည်
ပွင့်လင်း Polycarbonate အမိုးမိုးစာရွက်
Lecong Town တွင်တည်ရှိသည်,Foshan မြို့,ကွမ်တုံပြည်နယ်,တရုတ်,Foshan City Guansu ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း Co. , Ltd. ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်လွတ်လပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစွမ်းရည်ရှိပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည်.
Polycarbonate အခေါင်းပေါက်ကို Sabic ကုန်ကြမ်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်,ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလက်ရှိပလတ်စတစ်အခင်းများကိုဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေကြသည်,ဖန်လုံအိမ်ကဲ့သို့,ဥယျာဉ်နှင့်မိုးကောင်းကင်.
မော်ဒယ်:Polycarbonate တံခါးရွက်ကာကာ ကွင်းခတ်ပစ္စည်း:Engineering Plastic အဖုံးစာရွက်:Polycarbonate အစိုင်အခဲစာရွက် လျှောက်လွှာများ:ပြတင်းပေါက်,အိမ်ရှေ့တံခါး,ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်ချက်:မိုးကာကွယ်ခြင်း
PC Hollow Sheet နှင့် Polycarbonate Canopy Awning Aluminium Bracket
အရည်အသွေးမြင့် window awning polycarbonate canopy ကို polycarbonate အဖုံးစာရွက်နှင့်ခိုင်ခံ့သောအလူမီနီယမ်အလွိုင်းကွင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ခုခံအားကိုရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။,လုံခြုံပြီးတပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်. ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ
အကျယ်အရွယ်အစား:1.22မီတာ,1.56မီတာ,1.82မီတာ,2.1, အထူ :0.8မီလီမီတာ-၁၆ မီလီမီတာ ပစ္စည်း: Sabic Virgin ပစ္စည်း အရောင်:ရှင်းလင်းသော,အစိမ်းရောင်,အညိုရောင်,Opal,အဖြူရောင်,အပြာရောင်
ဖောင်းကြွ Polycarbonate စာရွက်
အရွယ်အစား:2မီတာ*၃ မီတာ အရောင်:ရှင်းလင်းသော,အညိုရောင်,အစိမ်းရောင်,အပြာရောင်,Opal အထူ:0.8မီလီမီတာ-၁၆ မီလီမီတာ မျက်နှာပြင်:စိန်
Lexan Polycarbonate Corrugated စာရွက်
ပစ္စည်း:Polycarbonate corrugated ခေါင်မိုးစာရွက် အရွယ်အစား:5.8မီတာ,11.8မီတာအရှည် အရောင်:ရှင်းလင်းသော,ကြေး,အပြာရောင်,အစိမ်းရောင်,Opal အထူ:0.8မီလီမီတာ-၂.၇ မီလီမီတာ ရိုက်ပါ:ဆန်းစာရွက် အီးမေးလ်ပို့ပါ T
ပစ္စည်း:သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ & ဖန် အရွယ်အစား:1000မီလီမီတာ*၁၀၀၀ မီလီမီတာ*၂၂၀၀ မီလီမီတာ အရောင်:အနက်ရောင်,အဖြူရောင်,လိမ္မော်သီး လုပ်ဆောင်ချက်:အသံလုံ
ပွင့်လင်းသော Polycarbonate Kayak
ပစ္စည်း:Polycarbonate Solid Board ကိုရှင်းလင်းပါ အရွယ်အစား:3300မီလီမီတာ*၉၁၀ မီလီမီတာ*၃၃၀ မီလီမီတာ အရောင်:ကြည်လင်/ပွင့်လင်းသည် စွမ်းရည်:1-2လူ ထုပ်ပိုးခြင်း။:သစ်သားသေတ္တာ